Zviroto Engines: Nomad Maguta chiito chitsva RPG | Linux Vakapindwa muropa
Zviroto Engines: Nomad Maguta chiito chitsva RPG
Zviroto Zvirongwa: Nomad Maguta ine inogadziridza yekuvaka guta. Chinyorwa chitsva chinosvika kuzita iri pane ese Windows chikuva uye Linux. Zvakare, zvinoenderana neruzivo rwekuvandudza Suncrash, ichi chinyorwa chitsva chichavepo kutanga kusvika Steam Kutanga Kuwana uye zvakare muGOG mukati memwedzi waKurume.
Kune avo vasati vaziva Zviroto Engines: Nomad Maguta, chiito RPG mutambo wevhidhiyo, ndiko kuti, a kutamba-mutambo wevhidhiyo chiito uye kuvaka guta. Vatambi vanozokwanisa kuvaka, kushandisa otomatiki, kudzivirira maguta, kupona mune yepashure-apocalyptic nyika, kupenga, uye kuzadzwa nehusiku, pamwe nekutambudzwa nematekinoroji matsva akagadzirwa nesainzi uye zvisirizvo zviroto.
Mushure mekumirira, zvinoita sekunge kune matrailer muRinjini Injini: Nomad Maguta. Uye chokwadi ndechekuti vazhinji vari kuchimirira, uye kubva pane izvo zvakaonekwa kusvika parizvino, zvinotaridzika zvakanaka. Uyezve, kunyangwe mapuratifomu GOG uye Steam ivo vanongoratidzira chete kuti parizvino inowanikwa yeWindows, kubvira Suncrash ivo vasina kutonga kunze kwechiteshi cheLinux.
Kwechinguva isu tichafanirwa kumiriraSezvo vagadziri vane zvishoma zviwanikwa uye vasinga fungi kutanga madoko kusvikira vaine mutambo zvapera zvizere. Muchokwadi, chimwe chezvinhu zvakanyanya kunetsa muchirongwa ichi kuve zviwanikwa.
Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti iko kwekutanga kuwana kwaizotora gore rimwe kana maviri, uye kuti inoshandisa Unity 3D mifananidzo injini. Izvi zvinoreva kuti unogona shandisa neProton paLinux hapana kunetsa, kumirira chimwe chinhu chizvarwa kuti chisvike mune ramangwana.
Kana zvakadaro hunhu yeRoto Engines: Nomad Maguta, ndeaya:
Dhizaini yeguta rinoyangarara.
Rarama mune ino isingazivikanwe uye nerima nyika mushure meapocalypse.
Chengetedza kushomeka kwekugadzira uye zviwanikwa.
Tsvaga chiyero pakati pekuwedzera guta uye kuvaka zvivakwa zvinoraswa izvo zvinosiiwa kana zvichimanikidzwa kutiza.
Iine iyo nyowani nyowani:
Vatambi vanozokwanisa kuvaka kubva pachikuva chikuru cheguta rinobhururuka.
Zvimwe otomatiki uye zviwanikwa vateresi vanowanikwa kunze kwebhokisi saka haufanire kuunganidza nemaoko.
Mapurazi matsva ekuvaka ekugadzirisa zvivakwa zvezvimwe zvinodiwa.
Zvivakwa zvitsva uye zviwanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Zviroto Engines: Nomad Maguta chiito chitsva RPG
Bvisa dhairekitori kana uchitsvaga paLinux
Akashinga izvozvi akavaka-mukati kutsigira iyo IPFS yakaparadzirwa network